အင်တာနက် SPEED ကို ပိုမိုတိုးမြင့် သုံးစွဲချင်သူများအတွက် | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
အင်တာနက် SPEED ကို ပိုမိုတိုးမြင့် သုံးစွဲချင်သူများအတွက်
Posted on November 5, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Internet speed နှေးနေလား ……? Internet speed ကိုနည်းလမ်း( ၅ ) မျိုးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံးဖြစ်အောက်ကူညီပေးချင်ပါတယ်။အချိန်ရမှဖတ်ပါ ။ ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ရင်လည်းကျော်သွားလိုက်ပါ။ကျွန်တော် ရေးသားပေးတဲ့(5) မျိုးထဲမှာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို (20 % ) နှုန်း တိုးပါတယ် တစ်ဆင့် ချင်းကိုသေသေချာချာနားမလည်လို့ကျော်လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ် ။မိမိတတ်နိုင်သလောက်လုပ်
ပြီးအင်တာနက် speed ကိုမြင့် တင်နိုင်ပါပြီ။
မည့် သည့်ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးမဆို မိမိတို့ ရှိရင်းစွဲ ထက်ပိုပြီး အင်တာနက် speed ကို မြန်အောင် သုံးစွဲခြင်ကြမှာပါ။
အင်တာနက် speed မြှင့်ဖို့ ဆိုတာတော့ တကယ်တော့ မခက်ပါဘူး…..
အင်တာကနက် speed မြင့် အောင် ကျွန်တော်ပြောပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေး.အောက်ကအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့် ပေးပါ။
DNS SERVER ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း ( ၁ )
DNS ဆိုတာဘာလဲ………? Domain Name Server (or) DNS ဆိုတာ Web Address တွေ ကို ကွန်ပြူတာတွေ နားလည်တဲ့ IP Addressတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးတာပါ။ ဥပမာ သင်က website တစ်ခုခု ကိုဝင်ရောက်လိုက်တယ် ဆိုကြပါပါစို့ ။ DNS Server က IP Address အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ သင်က ၄င်း website ကို အသုံးပြုလို့ ရတာပါ။ သင် ၀က်ဆိုက်တစ်ခု ဖွင့်တိုင်း DNS Server က ကြားထဲကနေလ အလုပ် လုပ်ပေးနေ တာဖြစ်တဲ့ အတွက် အင်တာနက် အမြန်နှုန်းက DNS server ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ လူအများစုက Internet Service Provider(ISP) တွေရဲ့ DNS ကို သုံးကြပါတယ်။ သင့် အင်တာနက် Speed ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လို့ သင့် ISPရဲ့ DNS ကို မသုံးဘဲ တစ်ခြား DNS(google dns,open dns etc:)တွေကို ပြောင်းလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
windows xp အတွက် dns server ပြောင်းလဲနည်းများ
Control Panelကိုဖွင့် ပါ။
‘Classic View’ if you haven’t yetဆိုတာကို swift off လုပ်လိုက်ပါ။
‘Network Connections’ ကိုdouble click နှင့် ဖွင့် ပါ။
Connectionကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ ။ LAN ဆိုရင် Local Area Network ကိုရွေးပါ။Modemဆိုရင် Modemကိုရွေးပါ။
Network ConnectionကိုRight click ထောက်ပြီး မိမိအသုံးပြုတဲ့LAN သို့ မှဟုတ် Modemကိုရွေးပြီး Properties’ ကိုနိုပ်ပါ။
Properties ကိုနိုပ်ပြီးတာနှင့် box လေးတစ်ခုကျလာပါလိမ့် မယ်, ‘Networking’ ကိုနိုပ်ပါ။
‘Internet Protocol (TCP/IP)’. မှာ Double click နှင့် ဖွင့် လိုက်ပါ။
“Use the following DNS server addresses:”ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
‘Preferred DNS server” မှာ : 8.8.8.8 ကိုရိုက်ပေးပါ။
‘Alternate DNS server’မှာ : 8.8.4.4 ကိုထည့် ပေးပါ။
OKကိုနိုပ်ပါ။ , OK ထပ်နိုပ်ပါ ။, OK နောက်ထပ်တစ်ခါ ( သုံးခါ နိုပ်ပါ )
14. Computer ကို restart ချပါ။
windows7အတွက် DNS ပြောင်းလဲနည်း
———————————————————- Control panel ကိုဖွင့် ပါ
Network and Internet ကိုဖွင့် ပါ။
Network and Internet မှာ ‘Network and Sharing Center’. ကိုရွေးပါ။
‘Change adapter settings’ကိုရွေးပါ။
Preferred DNS server” မှာ : 8.8.8.8 ကိုရိုက်ပေးပါ။
bandwidth လုပ်ခြင်း (မြှင့် တင်ခြင်း ) —————————————————————
windows operation system If you are using Windows Operating System then you might not be aware of fact that 20% of of your total Internet bandwidth is ‘Locked’ for ‘Windows Update’ purpose. If you will perform following tweak then you can Increase your Internet Speed by 20% !
In this trick we will unlock this reserved internet speed byasimple and easy tweak.
WinKey + R ကိုနိုပ်ပြီးတော့Run ကိုခေါ်လိုက်ပါ။
Run ထဲမှာ GPEDIT.MSC ကိုရိုက်ပြီး entre ခေါက်လိုက်ပါ။
Group Policy Editor Window ပေါ်လာပါလိမ့် မယ်။
Administrative Templates -ကနေ Network ကိုရွေး QOS Packet Scheduler ကိုထပ်ရွေးပါ။
Limit reservable bandwidth ကိုနိုပ်ပါ။
Limit reservable bandwidth Right click ထောက်ပြီး properties ကိုဝင်ပါ။
Not Configured’, ကို ‘Enable’ရွေးပြီး Bandwidth Limit ကို 0% ထားပေးပါ။
ဒါဆိုရင် မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့( ဥပမာ – facebook စတာတွေမှာ ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် အသုံးပြုလာနိုင်မှာပါ။ Mozilla Firefox အတွက်နည်းလမ်း
menu bar မှာ Tools ကိုရွေးပါ
Linux Usersသမားတွေအတွက်က menu barမှာ Editကိုရွေးပါ
Linux Usersသမားတွေအတွက် က Preferences ကိုနိုပ်ပါ။
Content Tab ကိုနိုပ်ပါ။
Internet Explorer အတွက်နည်းလမ်း—————————————– ——
Tool ကိုနိုပ်ပါ။ present on top menu bar
Internet Options ကိုနိုပ်ပါ။
Custom Level ကို slect လုပ်ပါ။
‘Scripting’ label အထိ ရောက်အောင်ရှာလိုက်ပါ။
‘Active Scripting’ မှာ disable လုပ်ပြီး ok လုပ်လိုက်ပါ။
Google Chrome အတွက်နည်းလမ်း—————————————————-
Toolbar မှာ Spanner Icon ကိုရှာလိုက်ပါ။
Content settings ကိုနိုပ်ပြီး ‘Privacy’ ကိုနိုပ်ပါ။
Turn off automatic updates လုပ်ခြင်း
မိမိအင်တာနက်ဖွင့် ပြီးအသုံးပြုသည့် အချိန်တိုင်း မှာ Windows update တွေဟာ အနောက်ကနေ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒီကောင်တွေဟာ ဆိုဒ်ပမာဏကလည်းကြီးမားတဲ့ အတွက် မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ အင်တာနက် speed ကို နှေးကွေးလေးလံစေပါတယ်။ဒါကြောင့်automatic updates လုပ်နေတာတွေကို ပိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သင့် စက်ဟာပုံမှန်ထက်( 20 % ) ပိုမိုပေါ့ ပါးသွက်လက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
– Windows XP ?
—————————————- ‘Control Panel’က်ိုဖွင့် ပါ ။
‘Classic view’ enabledလုပ်ပေးပါ။
‘System’မှာ Double click နိုပ်ပေးပါ။
‘Automatic Updates’ ကိုနိုပ်ပါ။
‘Automatic Updates’ ကိုနိုပ်ပြီး ‘Keep my computer up to date.’ OK ပေးလိုက်ပါ။
——————————— Start ကိုနိုပ်ပါ။
search box နေရာမှာ ‘System and Security’ ကိုနိုပ်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။
‘Windows Update’ မှာ ‘Turn automatic updating on or off’ ဆိုတာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
‘Important updates’ နေရာမှာ ‘Never check for updates’ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။
OK နိပ်ပြီး Save လုပ်ခဲ့ ပါ။
windows 8 , windows 8.1 အတွက်လည်း windows7လိုမျိုးပဲလိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Window network socket reset လုပ်ခြင်း
———————————————————— OS တစ်ခုကနေ အချက်အလက်တွေကို ပို့ဖို့အတွက် network socket တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို့က ကြာလာရင် overload ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုရလေးစေပါတယ်။ run ကိုဖွင့် ပြီး , cmd ရိုက်ပြီး enter ခေါက်; command prompt တက်လာရင် ( netsh winsock reset ) စာကိုရိုက် Enter ခေါက်လိုက်ပါ ပြီးရင် ကွန်ပြူတာကို Restart လုပ်ရပါမယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အောက်ကဆော့ ဝဲလေးကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
TCPEye Download here
အသစ်တင်တိုင်း facebook ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်
ဒီမှာ like လုပ်ပေးပါ။
http://www.saithu102.blogspot.com&nbsp; ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာ သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ အဆင်ပြေရင် ဆိုဒ်က ကြော်ငြာများကို တစ်ချက်လောက်နှိပ်သွားပါအုံးခင်ဗျာ
This entry was posted in နည်းလမ်းများ. Bookmark the permalink.
← V Root 1.7.2 latest version	Thor: TDW – The Official Game v1.0.0 [APK] [Data] [offline] [617MB] [Data Direct Link Added] →
4 thoughts on “အင်တာနက် SPEED ကို ပိုမိုတိုးမြင့် သုံးစွဲချင်သူများအတွက်”	hlahla htwe says:	November 5, 2013 at 10:11 am	ပြောချင်တာထက်မေးချင်တာပါခင်ဗျာ bloger apk သုံးပီး postေ၇သားတဲ့အခါ စာေ၇းတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပေမယ့် ဓါတ်ပုံတင်ပေးတဲ့အခါတွေမှာ တစ်ပုံထက်ပိုပီးတင်လို့မ၇ဖစ်နေလို slect ပေးလို့လည်း၇ဘူးအကို နည်းလမ်းကောာင်းလေးများ၇ှိ၇င်ညွှန်ကြားပေးပါဦးအကို …..kolwin159@gmail.com ကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအကို လေးစားလျှက်ပါ
Reply	hlahla htwe says:	November 5, 2013 at 10:11 am	ပြောချင်တာထက်မေးချင်တာပါခင်ဗျာ bloger apk သုံးပီး postေ၇သားတဲ့အခါ စာေ၇းတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပေမယ့် ဓါတ်ပုံတင်ပေးတဲ့အခါတွေမှာ တစ်ပုံထက်ပိုပီးတင်လို့မ၇ဖစ်နေလို slect ပေးလို့လည်း၇ဘူးအကို နည်းလမ်းကောာင်းလေးများ၇ှိ၇င်ညွှန်ကြားပေးပါဦးအကို …..kolwin159@gmail.com ကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအကို လေးစားလျှက်ပါ
Reply	waiximgyi says:	November 5, 2013 at 9:48 pm	ကျေးဇူးပါအစ်ကို…ညီလေး စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော် (h)